Jorge Jurado Mi-Rap Momba Ny Median’Olon-tsotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Febroary 2018 14:46 GMT
Trohy MPEG4 Video (.mp4)
Trohy Flash Video (.flv)
Fantatro fa somary efa lany lamaody – olona mi-rap momba ny bilaogy-lahatsary – saingy tsy vitany hoe poetika ihany ny hira ConVerGentes an'i Jorge Jurado, fa maneho taratra ny fahamarinana momba ny media ifarimbonana amin'ny ankapobeny ihany koa: mamorona izahay satria voatery, fa tsy hoe nolazaina izahay mba hanao izany.
Ireo mpikambana mavitrika indrindra ao amin'ny ConVerGentes. Jorge Jurado no eo amin'ny farany havanana.
Iray amin'ireo tanora 20 eo ho eo ao amin'ny vondrom-piarahamonina sarangan'ny mpiasa ao amin'ny manodidina an'i San Javier La Loma izay mandrafitra ny vondrona median'olon-tsotra “ConVerGentes” i Jorge. Iray amin'ireo vondrona telo izay mandrafitra ny tetikasa lehibe indrindra HiperBarrio izy ireo. Ny ConVerGentes dia kilalaon-teny mitambatra amin'ireo teny Espaniôla hoe fampivondronana, fahitana, ary olona.
Mpanao ravaka an-tsary manatalenta sady mpanakanto hip-hop i Jorge, izay namokatra lahatsary fanadihadiana fohy momba ny kolontsaina graffiti ao Loma sy bilaogy ao amin'ny La Voz del Silencio. Miresaka momba ny mety ho fampiasana ny media ifarimbonana mba hanavotana ireo tantara adino sy kolontsain'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana ny hirany “ConVerGentes”, izay nanaovany fampisehoana mivantana tany am-piandohan'ny volana janoary 2008. Izy ihany koa no namorona ny lohatenin'ny weblog-n'ny ConVerGentes rehetra tamin'ny fomba mamaritra ny votoatiny sy ny olona ao ambadika. Afaka mitsidika ny bilaogin'izy ireo tsirairay ianao amin'ny alàlan'ny fandehanana ao amin'ny tranokalan'ny ConVerGentes ary manindry ny rohy tsirairay eo amin'ny ankavanana eo ambonin'ny “Blogroll”.
10 ora izayKolombia